Khabiirka Cilmiga: Farsamada Google Analytics Best
Inta badan ganacsatada badankoodu way yar yahiin falanqaynta webka iyo muhiimada Google Analytics. Waxay marmar u saxiixaan xisaabyadooda AdSense oo waligoodna fiiro gaar ah u haayaan waxa ku jira boorarkooda. Dad yar oo keliya ayaa ogaanaya muhiimada Google Analytics iyo tabaha la xiriira.
Jason Adler, Maareeyaha Guusha Macaamiilka Kaabis , wuxuu caddaynayaa in shaandhadu ay tahay caawimo weyn marka ay ka caawiyaan maareynta nooca xogta boggayaga internetka. Haddii ay dhacdo, waxaad arkaysaa qaar ka mid ah cilladaha ku jira wargeysyada Google Analytics, tani waa waqtigii lagu abuuri lahaa shaandhooyin si loo xaqiijiyo ilaalinta boggaaga - commercial appraisals. Maydhayaashu waxay tirtirayaan dhammaan qashinka iyo wasakhda ilaa iyo inta lagu siiyo waxa kaliya ee sharci ahaan, sax ah oo lagu kalsoonaan karo. Xogta aan la filaynin iyo xogta qarsooni kuma siin karto natiijooyinka la rabay. Taasna waxba kama sheegi doonto waxa ku saabsan waxqabadka boggagaaga iyo sida loo hagaajiyo. Si aad u sameysid shaashaddaada, waa inaad tagtaa Google Analytics oo guji cutubka xisaabta halkaasoo feylaha ay joogaan ama meesha aad rabto inaad abuurto. Waa inaadan marnaba fiirin warbixinta adigoo abuuraya shaandheelo ku haboon maxaa yeelay waxay hoos u dhigi kartaa waxqabadkaaga boggaaga. Waa inaad ku dartaa shaandhooyin badan intii suurtagal ah si loo hagaajiyo waxqabadka guud ee goobtaada..
Ka reebista Gaadiidka Gudaha
Waa in aad marwalba fiiro gaar ah siisid taraafikada gudaha iyo ilaha aan la aqoon ee goobtaada. Haddii aad aragto in waxqabadka goobtaada aan la fileynin, tani waa waqtigii aad abuuri lahayd shaandhooyin iyo aad u dhaqaajinayso si deg deg ah. Waa inaad codsataa shaandhada iyo ka saartaa IP-yada aan ka muuqanin liiskaaga si aad u hesho natiijooyinka la doonayo. Ugu horeyntii, waa inaad gashaa magaca shaandhadaada adiguna riix badhanka faylka laga saaray. Qeybta hore ee Google Analytics, ma awoodid inaad abuurto shaandhada oo aan ka saari karin IP-yada liiska. Laakiin hadda waxaa suurtagal ah in labada hawloodba si fiican u qabato.
Isticmaalida URL-yada Warbixinnada si loo yareeyo
Waxyaabaha kale ee aad xasuusnaato waa inaad ku qasbeysaa warbixinnada URL-ga ee jajabka. Mid ka mid ah dhibaatooyinka waaweyn ee ugu badan ee la xariira Google Analytics waa in ay muujinaysaa noocyo kala duwan oo warbixinno ah labada kiis iyo kiis hoose. Si kastaba ha noqotee, waxaa suurtogal ah in laga takhaluso dhibaatadan adigoo ku qasbaya in warbixinnada URL-kooda lagu soo rogo kiis yar. Sidii aad u hubin laheyd in caafimaadkaaga goobtaada iyo xaqiiqadaada la hayo inta lagu jiro bisha dhexdeeda.
URL buuxa ee gudbinta
Haddii aad dhiseysid qaar ka mid ah isku xidhka, waa inaad raadisaa boggaga gudbinta ee Google Analytics. Halkan waxaa suurtagal ah inaad hesho macluumaad ku habboon oo muujinaya URL-yada domain iyo subdomain. Waa inaad had iyo jeer maskaxda ku haysaa in calaamaddaada raadinta si habboon loogu rakibo Google Analytics. Haddii aanad lahayn lambarkan, waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad qabsatid sharootooyinka oo waxaad gelisaa boggaaga.